पुराना कपडा फ्याँक्नु भन्दा यसरी ब्याग बनाउने कि ? (भिडिओ) - Video blogging portal of Nepal
काठमाडौं । घरमा पुराना कपडा थुप्रिएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यदि हो भने यो भिडियोले तपाईंको चिन्ता दुर गरिदिनेछ । काठमाडौंको असनमा दुई युवाले पुराना कपडा पुर्नप्रयोगमा ल्याउने जुक्ति निकालेका छन् । फाटेका जिन्स, थोत्रा कपडालाई उनीहरुले आकर्षक ब्यागमा रुपान्तरण गरिदिन्छन् । असनमा राजन चक्रधर र पुष्पा स्थापितले खोलेका हुन् ‘अपसाइकल नेपाल– रिभाइभ’ ।
अपसाइकल नेपालले ग्राहकले ल्याएका पुराना वा फाटेका कपडाबाट ल्यापटप, ट्याब वा अन्य ग्याजेटको ब्याग बनाइदिन्छ । त्यति मात्रै होइन अफिसियल र शपिङ ब्याग पनि तयार पार्छ । ग्राहकले पुराना कपडा दिएर आफ्नो प्रयोजन अनुसारको ब्याग पनि अर्डर गर्न सक्छन् । त्यसमा केही शुल्क लिएर अपसाइकल नेपालले तपाईंले भनेजस्तै डिजाइनको ब्याग बनाइदिन्छ ।
एमबीए तहको अध्ययन सक्न लागेका यी दुई युवा आफ्नै उद्यमले स्थापित हुने दौडमा छन् । बजारीकरणमा दौडिरहेका उनीहरु पुराना कपडाको पुर्नप्रयोगले वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरणमा पनि टेवा पुग्ने तर्क गर्छन् । हामीले यिनै दुई युवासँग भलाकुसारी गरेका छौं ।